ချစ်ကြည်အေး: ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ~
ကျွန်မ ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ သဘောကျလွန်းလို့ ခဏခဏ ဆိုင်ရှေ့ဖြတ်လျှောက် ချောင်းကြည့်ခဲ့ရတဲ့ အင်္ကျီလေး၊ ဈေးလည်းချရော တခါထဲ ဝယ်ချလာလိုက်တာပေါ့။ ပြီးတော့ သွားစရာလမ်းရှာပြီး ဝတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပျော်တာပေါ့…။ လက်လျှော်တွေဘာတွေတောင် ဖွဖွလျှော်မိသေးတယ်။ နောက်တကြိမ်၊ နောက်တကြိမ် ဒီလိုနဲ့ အကြိမ်တွေများလာတော့ ဝတ်ပြီးရင် အဝတ်လျှော်စက်ထဲ ပစ်ထည့်လိုက်တော့တာပဲ။ ဒီအဝတ်လေးပိုင်ဆိုင်ရရင် ပျော်မှာပဲထင်ခဲ့တယ်။ တကယ်တမ်း ပျော်ရွှင်မှုက ခဏတာလေးပဲ။ ဘယ်အရာမဆိုပါလေ…ခဏတာပါပဲ။
ကျွန်မအတွက်တော့ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဘဝဟာ နေပျော်သားပဲလို့ ထင်မိတဲ့ခဏတာ။
အဲလိုခဏတာအချိန်ကလေးတွေ ကြိမ်ရေများများဆက်နေဖို့တော့ လိုတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အတိတ် မဟုတ်ဘူး၊ မဖြစ်သေးတဲ့ အနာဂတ် မဟုတ်ဘူး။ လက်ရှိအပေါ်မှာ စိတ်ကို တည်နိူင်တဲ့အချိန်ဟာ ကျွန်မအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေတခုပဲ။ ကျွန်မအတွက်တော့ နေပျော်တယ်ဆိုတာ အဲတာပဲလို့ အဓိပါယ်ဖွင့်ချင်တယ်။
တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်မှုက လိုက်ရှာလေ ဝေးလေ…..
လိုက်မရှာတော့တဲ့အချိန်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတိပြုမိလိုက်တဲ့အချိန်၊ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ပြန်သိလိုက်တဲ့အချိန်၊ ကိုယ့်အသိကို လက်ရှိပေါ်မှာ ပြန်တင်လိုက်နိူင်တဲ့အချိန်၊ အသိ သတိကို လက်ရှိပေါ် အဖန်ဖန် ဆွဲတင်ထားနိူင်တဲ့အချိန်….
အဲအချိန်တွေဟာ ကျွန်မအတွက် စိတ်အေးချမ်းကြည်လင်နေချိန်ပဲ။
ရှင်းအောင်ပြောရရင် ချမ်းသာဖို့အတွက် မချမ်းသာတဲ့စိတ်ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်နိူင်တဲ့ အချိန်ပါပဲ။
မချမ်းသာတဲ့စိတ်တို့ရဲ့သဘာဝက အတိတ်မှာ နေလေ့ရှိတယ်။ အနာဂတ်ကို လှမ်းမျှော်တယ်။
ဒီနှစ်ခုက ကင်းလွတ်အောင် နေနိူင်သမျှနေတယ်။ စိတ်ကို ပြန်ပြန်တင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မလွယ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်မ သိတယ်။ အဲလိုလုပ်နိူင်ဖို့ ပထမဦးဆုံးက အမှန်ကို မြင်ဖို့ လိုတယ်။ ကိုယ် ဘာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာ သေသေချာချာသိဖို့လိုတယ်။ နောက်တခုက စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာရမယ်။ စိတ်ကို ဦးဆောင်မောင်းနှင်နိူင်ဖို့လိုတယ်။ သွားချင်ရာသွားနေတဲ့စိတ်ကို ကိုယ်လိုရာ ပြန်ပြန်တည့်မတ်၊ ပဲ့ကိုင်ပေးနေဖို့ပါပဲ…။
နာမကျန်းတဲ့နေ့ရက်တွေကို နာနာကျင်ကျင်ဖြတ်သန်းဖူးခဲ့တဲ့ ကျွန်မအတွက်ကတော့ ကျန်းမာချင်တဲ့စိတ်က ဦးဆောင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကို မပျော်ရွှင်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေက ဘာတွေလဲ…၊
ကိုယ့်ကို ပျော်ရွှင်စေတာတွေက ဘာတွေလဲ…။
ပြီးရင် ကိုယ့်အိပ်ရာဘေးမှာ ကပ်ထားပြီး မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ဒီနေ့တော့ ပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာတွေပဲ လုပ်ကိုင်ဖို့ တွေးထားလိုက်ပါ။ တနေ့တာမှာ မပျော်ရွှင်စေတဲ့ အတွေးအကြံ ဖျတ်ကနဲဝင်လာတာနဲ့ ပျော်ရွှင်စေမယ့်တခုခုကို ချက်ချင်းထပြီး လုပ်ဆောင်လိုက်တာမျိုး။ ကျွန်မအတွက်တော့ မပျော်ရွှင်စရာ စိတ်ကလေးတချက် ဝင်လာတာနဲ့ သီချင်းနားထောင်လိုက်တယ်။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း ထလုပ်လိုက်တယ်။ ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတာ တခုခု စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်လိုက်တယ်။ စိတ်ကို ချယ်နယ်ပြောင်းဖွင့်လိုက်သလိုမျိုးပါပဲ။
အလေ့အကျင့်ပါပဲ၊ လုပ်ပါများလာတဲ့အခါ မပျော်ရွှင်စရာစိတ်ရယ်လို့ ဝင်လာစရာ နေရာမရှိတော့တဲ့အနေအထားကို ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
ခုရက်တွေမှာတော့ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာထက် အေးချမ်းမှုထဲ စိမ်နေရတဲ့နေ့ရက်များပါပဲ...။
ဘယ်လိုပဲ ခေါင်းစဉ်တပ်တပ် မမြဲတဲ့အနှစ်သာရကတော့ အတူတူပါပဲလေ....
သဘောကလြှနျးလို့ ခဏခဏ ဆိုငျရှဖွေ့တျလြှောကျ၊ သှားပွီးခြောငျးကွညျ့ခဲ့ရတဲ့ အကငြ်္ီလေး၊ ဒါလေးပိုငျဆိုငျရရငျတော့ သိပျပြျောမှာပဲ ထငျခဲ့တယျ။ ဈေးလညျးခရြော တခါထဲ ဝယျခလြာလိုကျတာပေါ့။ ပွီးတော့ သှားစရာလမျးရှာပွီး ဝတျပဈလိုကျတယျ။ ပြျောတာပေါ့။ လကျလြှျောတှဘောတှတေောငျ ဖှဖှလြှျောမိသေးတယျ။ နောကျတကွိမျ၊ နောကျတကွိမျ ဒီလိုနဲ့ အကွိမျတှမြေားလာတော့ ဝတျပွီးရငျ အဝတျလြှျောစကျထဲ ပဈထညျ့လိုကျတော့တာပဲ။ ဒီအဝတျလေးပိုငျဆိုငျရရငျ ပြျောမှာပဲထငျခဲ့တယျ။ တကယျတမျး ပြျောရှငျမှုက ခဏတာလေးပဲ။ ဘယျအရာမဆိုပါလခေဏတာပါပဲ။
ကြှနျမအတှကျတော့ ပြျောရှငျမှုဆိုတာ ဘဝဟာ နပြေျောသားပဲလို့ ထငျမိတဲ့ခဏတာ....
အဲလိုခဏတာအခြိနျကလေးတှေ ကွိမျရမြေားမြားဆကျနဖေို့တော့ လိုတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ အတိတျ မဟုတျဘူး၊ မဖွဈသေးတဲ့ အနာဂတျ မဟုတျဘူး။ လကျရှိအပျေါမှာ စိတျကို တညျနိူငျတဲ့အခြိနျဟာ ကြှနျမအတှကျ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့အခွအေနတေခုပဲ။
ကြှနျမအတှကျတော့ နပြေျောတယျဆိုတာ အဲတာပဲလို့ အဓိပါယျဖှငျ့ခငျြတယျ။
တကယျတော့ ပြျောရှငျမှုက လိုကျရှာလေ ဝေးလေ..
လိုကျမရှာတော့တဲ့အခြိနျ၊ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျသတိပွုမိလိုကျတဲ့အခြိနျ၊ ကိုယျ့စိတျကို ကိုယျပွနျသိလိုကျတဲ့အခြိနျ၊ ကိုယျ့အသိကို လကျရှိပျေါမှာ ပွနျတငျလိုကျနိူငျတဲ့အခြိနျ၊ အသိနဲ့ သတိကို လကျရှိပျေါ အဖနျဖနျ ဆှဲတငျထားနိူငျတဲ့အခြိနျ.
အဲအခြိနျတှဟော ကြှနျမအတှကျ စိတျအေးခမျြးကွညျလငျနခြေိနျပဲ။
ရှငျးအောငျပွောရရငျ ခမျြးသာဖို့အတှကျ မခမျြးသာတဲ့စိတျကို ဖယျထုတျလိုကျနိူငျတဲ့ အခြိနျပါပဲ။
မခမျြးသာတဲ့စိတျတို့ရဲ့သဘာဝက အတိတျမှာ နလေရှေိ့တယျ။ အနာဂတျကို လှမျးမြှျောတယျ။
ဒီနှဈခုက ကငျးလှတျအောငျ နနေိူငျသမြှနတေယျ။ စိတျကို ပွနျပွနျတငျရတယျ။ ဒါပမေယျ့ မလှယျဘူးဆိုတာ ကြှနျမ သိတယျ။ အဲလိုလုပျနိူငျဖို့ ပထမဦးဆုံးက အမှနျကို မွငျဖို့ လိုတယျ။ ကိုယျ ဘာကိုလိုခငျြတယျဆိုတာ သသေခြောခြာသိဖို့လိုတယျ။ နောကျတခုက စိတျဓါတျခိုငျမာရမယျ။ စိတျကို ဦးဆောငျမောငျးနှငျနိူငျဖို့ လိုတယျ။ သှားခငျြရာသှားနတေဲ့စိတျကို ကိုယျလိုရာ ပွနျပွနျတညျ့မတျ၊ ပဲ့ကိုငျပေးနဖေို့ လိုတယျ။
နာမကနျြးတဲ့နရေ့ကျတှကေို နာနာကငျြကငျြဖွတျသနျးဖူးခဲ့တဲ့ ကြှနျမအတှကျကတော့ ကနျြးမာခငျြတဲ့စိတျက ဦးဆောငျပါတယျ။
ကိုယျ့ကို မပြျောရှငျစတေဲ့အကွောငျးအရာတှကေ ဘာတှလေဲ၊
ကိုယျ့ကို ပြျောရှငျစတောတှကေ ဘာတှလေဲ။
ပွီးရငျ ကိုယျ့အိပျရာဘေးမှာ ကပျထားပွီး မနကျမိုးလငျးတာနဲ့ ဒီနတေ့ော့ ပြျောရှငျစမေယျ့အရာတှပေဲ လုပျကိုငျဖို့ တှေးထားလိုကျပါ။ တနတေ့ာမှာ မပြျောရှငျစတေဲ့ အတှေးအကွံ ဖတျြကနဲဝငျလာတာနဲ့ ပြျောရှငျစမေယျ့တခုခုကို ခကျြခငျြးထပွီး လုပျဆောငျလိုကျတာမြိုး။ ကြှနျမအတှကျတော့ မပြျောရှငျစရာ စိတျကလေးတခကျြ ဝငျလာတာနဲ့ သီခငျြးနားထောငျလိုကျတယျ။ ကိုယျလကျလကေ့ငျြ့ခနျး ထလုပျလိုကျတယျ။ ကိုယျစိတျပါဝငျစားတာ တခုခု စိတျနှဈပွီး လုပျလိုကျတယျ။ စိတျကို ခယျြနယျပွောငျးဖှငျ့လိုကျသလိုမြိုးပါပဲ။ အလအေ့ကငျြ့ပါပဲ၊ လုပျပါမြားလာတဲ့အခါ မပြျောရှငျစရာစိတျရယျလို့ ဝငျလာစရာနရော မရှိတော့တဲ့အနအေထားကို ရောကျလာပါလိမျ့မယျ....
ခုရကျတှမှောတော့ ပြျောရှငျမှုဆိုတာထကျ အေးခမျြးမှုထဲ စိမျနရေတဲ့နရေ့ကျတှပေါပဲ...။ ဘယ်လိုပဲ ခေါငျးစဉျတပျတပျ မမွဲတဲ့အနှဈသာရကတော့ အတူတူပါပဲလေ....